(ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်) ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်း တပ်မတော် တွေဝေနေချိန် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် အာဏာသိမ်းပုံ | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် (ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်) ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်း တပ်မတော် တွေဝေနေချိန် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် အာဏာသိမ်းပုံ
Written by Lwin Aung Soe August 7, 2008 at 5:52 am
Tagged with ခင်ညွန့်, တပ်မတော်, ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထ�, ရှစ်လေးလုံး, လူထုအုံကြွမှု, စောမောင်, နေဝင်း, ၈၈၈၈	« Mao’s ghost
Fact Sheet: the United States Supports the People of Burma »
Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top Posts	Happy Birthday to Daw Aung San Suu Kyi	(1) English Section
Mizzima (Burmese)လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး အိမ်မှာ အားပါးတရစားနိုင်တဲ့ ဂဏန်းမဆလာချဉ်စပ် December 10, 2016ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်နယ်ထရန့် အနိုင်ရရန် ရုရှကူညီပေးခဲ့ဟု စီအိုင်အေ မှတ်ချက်ပြု December 10, 2016အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်အဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (အပိုင်း ၁) December 10, 2016၇ တန်းကျောင်းသူကို အဓမ္မပြုကျင့်သည့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခံရ December 10, 2016နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် ဂျပန်တို့၏ ခွေးလက်ဆောင်ပေးသည့် သံခင်းတမန်ခင်း နည်းလမ်းအသုံးပြုလိုမှုအပေါ် ရုရှ လျစ်လျူရှု December 10, 2016ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ခံရဟု စင်ကာပူ The Independent သတင်းစာက ပြန်လည်တုံ့ပြန် December 10, 2016သေဒဏ်ကျခံနေရသူ မြန်မာနှစ်ဦးအမှု တရားရုံးက နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် အမိန့်ချတော့မည် December 10, 2016ကရင်ပြည်နယ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်း ဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်ဖိုရမ်ကျင်းပ December 10, 2016 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)ဒေးလီးမေးလ် မှားရေးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား ကလေး ငယ် နှိပ်စက်သူတွေ ဖမ်းဆီးထားပြီရခိုင်ပြည်နယ်ကို လွတ်လပ်စွာ သွားရောက် ကူညီခွင့်ပေးဖို့ ၁၄ နိုင်ငံ သံတမန်တွေ တိုက်တွန်းမန္တလေးအစိုးရရဲ့ ရသုံးမှန်းခြေ စာရင်းက ကျပ်သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းကျော်ကို တိုင်းလွှတ်တော် ဖြတ်တောက်လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ AAPP ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကလေးမြို့က လယ်ယာမြေတွေ အတွက် မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် ကူညီမယ်တိုင်းရင်းသားစာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဆိုကို မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး အကောင်ထည်မဖော်ဘူး လို့ ဝေဖန် Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)AFP/Mizzima December 10, 2016Myanmar upset over ‘false child torture video’ that went viral December 10, 2016EU marks Human Rights Day December 10, 2016FMI reports ‘strong’ economic results December 10, 2016Russia interfered in US election to help Trump win: report December 10, 2016Shine Zaw-Aung December 10, 2016Myanmar-India Relations – Trade and Economic Perspectives December 10, 2016Feathered dinosaur tail found encased in amber in Myanmar December 10, 2016 BBC (Burmese)သမ်မတအိုဘားမား ကုလညီလာခံမှာ IS အန်တရာယျ ပွောမွနျ​မာ့​စီးပှား​ရေး​ဖို​ရမျ USကငျြးပပွငျ​သဈ​တဈ​ဦး အသတျ​ခံ​ရ​တာ အတညျ​ပွု RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldObama orders review of election-related hacking December 9, 2016President Barack Obama has orderedafull review into hacking aimed at influencing US elections going back to 2008, the White House said Friday.5 ways the US can stop hackers December 9, 2016The US has now publicly blamed Russia for hacking its elections. What are the options to combat these cyberattacks? CNN's Jim Sciutto reports.Trump stuns ex-CIA boss with Russian hack denial December 9, 2016Ex-CIA chief: Russian hackers trying to 'mess with our heads' October 18, 2016A former head of the CIA said Tuesday that Russian hacking of US political groups is intended to "mess with our heads" and shake confidence in the American electoral system -- rather than influence the outcome on Election Day.South Korea's parliament votes to impeach President Park Geun-hye December 9, 2016Lawmakers in South Korea's National Assembly voted overwhelmingly Friday to impeach President Park Geun-hye overacorruption scandal. The vote was 234-56, with six abstentions.South Korea presidential scandal: What you need to know December 9, 2016South Korea has been plunged intoapolitical scandal that has engulfed the presidency of Park Geun-hye and has seen thousands of protesters take to the streets.Military: 50,000 ISIS fighters killed December 9, 2016As many as 50,000 ISIS fighters have been killed since the war against the terror group began,asenior US military official told CNN.What you need to know about Aleppo December 9, 2016For many, Aleppo evokes images of blood-soaked children, decimated buildings and dust-covered rescue workers. IPS Top newsWomen Human Rights Defenders: Targeted for Identity and Activism December 9, 2016Enough Is Enough December 9, 2016Corruption Control–Is It Feasible oraFantasy? December 9, 2016Why Achieving Sdg Goal 8 on Decent Work and Economic Growth Is Critical for Kenya December 9, 2016Anti-Torture Law Helps Pay Off Chile’s Debt to Human Rights December 8, 2016Fiscal Austerity Has Been Blocking Economic Recovery December 8, 2016Gambia May Not Join African Withdrawals from ICC December 8, 2016Resilient People & Institutions: Ecuador’s Post-Earthquake Challenge December 8, 2016Meta	Register	Log in